Mintigo: Predictive Lead Leading maka Enterprise | Martech Zone
Mintigo: Predictive Lead Scoring maka Enterprise
Wednesday, November 19, 2014 Wenezde, August 26, 2015 Douglas Karr
Dị ka ndị na-ere ahịa B2B, anyị niile maara na ịnwe usoro nyocha iji chọpụta ndị ahịa dị njikere ma ọ bụ ndị nwere ike ịzụta ihe dị oke mkpa iji na-agba ọsọ mmemme ọgbọ na-aga nke ọma yana iji jigide usoro ahịa na ahịa. Mana itinye usoro ihe nchịkwa na-arụ ọrụ n'ezie dị mfe ikwu karịa eme. Na Mintigo, I nwere ike ugbu a nwere ụdị akara ụdị nke na-eme ka ike ịkọ nchịkọta na nnukwu data iji nyere gị aka ịchọta ndị na-azụ gị ngwa ngwa. Ọ dịghị nkọ.
Mintigo bụ onye na-anya usoro ọhụụ ọhụụ na mbọ anyị na-agba. Heather Adams, onye njikwa ahia na netFactor
Mintigo Predictive Lead Scoring na-enyere ndị na-ere ahịa ụlọ ọrụ aka ịgbakwunye ike nke ịkọ ahịa amụma na isi ihe isi gị.
Olee otu Mintigo Predictive Lead Scoring si arụ ọrụ
Mintigo na-amalite site na ihe ị maara, na-ebuli gị CRM na data akpaaka data.
Eleghị anya ị maara ụfọdụ ihe gbasara ndu gị: Kedu mkpọsa ha hụrụ, ebe ha pịrị na ihe ha mejupụtara n'ụdị gị. Anyị na-akwado data bara uru iji bido ịmebe usoro amụma gị.
Mintigo na-agbakwunye ihe ha maara, na-agbakwụnye ọtụtụ puku akara ngosi ntanetị. Mintigo na-anakọta ma na-emelite kwa puku ihe data na nde nde ụlọ ọrụ. Ozi a gụnyere ozi ọha na eze gbasara ego, ndị ọrụ, ego, teknụzụ, azụmaahịa na usoro azụmaahịa yana nyocha asụsụ gbasara akara ụkwụ dijitalụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Nsonaazụ - profaịlụ ogo 360 nke ndu ọ bụla na nchekwa data gị.
Mintigo na-emetụta amụma nchịkọta, crunching oke data na igwe mmụta iji gbawaa CustomerDNA ™. Mintigo na-ewe data gị, data nke anyị, na uru gị kachasị elu na-eduga ma jiri mmụta igwe na-achọpụta CustomerDNA ™ gị, usoro nke ihe ngosi na-eme ka ha dị iche ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-eduga na nchekwa data gị. Nsonaazụ bụ usoro akara ngosi na akara ngosi nke nwere ike ịkọ na ọ nwere ike ịtụgharị.
Mintigo akara nchekwa data gị, na-achọpụta ụzọ kachasị baa uru gị. Mintigo na-eji akara ngosi amụma pụrụ iche gị iji akara akara ndị dị ugbu a yana ụzọ ọ bụla nke na-abanye n'olulu gị na sistemụ ahịa na ire ere dịka Eloqua, Marketo na Salesforce.com. Nke a nwere mmetụta dị mkpa na ego gị na-enweta ugbu a ị maara nke na-eduga izipu ozugbo na Ahịa na ndị ga-azụlite.
Mintigo jikọtara ọnụ nke ndị ọzọ na igwe ojii ire ahịa igwe
Mintigo na-enyere ndị ahịa aka ịchọta ndị na-azụ ahịa ngwa ngwa site na iji amụma nchịkọta. Nwere ike iji ọgụgụ isi butere oke ibu nke ndu wee mepụta mkpọsa ahaziri iche na iji aka clicks.
Were ya na ị ka mechara ịmegharị ụdị gị na peeji nke ọdịda. Ihe niile dị mma maka mkpokọta webụsaịtị ọhụrụ gị yana ndị ahịa gị nwere obi ụtọ. Site na mkpọsa ị mepụtara, ị ga-emepụta ndu na obere oge. Eloqua na-eme ka usoro a dị mfe. Ugbu a, gịnị na-esote?
￼￼Mintigo emepụtala ihe ọhụrụ pụrụ iche iji ihe ọhụụ ọhụrụ nke Eloqua Oracle Marketing AppCloud nyiwe, na-eweta Predictive Marketing n'ime Eloqua maka oge mbụ site na ikwe ka ị mee mkpebi ndị data na-eme ozugbo.
Mintigo leverages ike nke nnukwu data na amụma nchịkọta iji bulie ahia gi. Mintigo na - enyere gị aka wuo ụdị amụma ị ga - ebu maka ahịa ahịa gị ọ bụla. Maka usoro amụma ọ bụla, Mintigo na-anakọta data akụkọ ihe mere eme iji wuo ihe kachasị sie ike.
Iji Mintigo na-ebu amụma akara na egosi ị nwere ike ijide n'aka na ị lekwasịrị anya na kọntaktị ziri ezi, na-enyere gị aka ịchọta ndị na-azụ ngwa ngwa.
Ugbu a na Mintigo ọhụrụ Oracle Marketing AppCloud mwekota, oge ọ bụla ịchọrọ ịme mkpebi amụma na-adọta Mintigo's Action ngọngọ n'ime Mgbasa Kanvas. Naanị ịhazi Mintigo's Action ngọngọ iji akara akara mbata gị maka usoro ziri ezi ma ị ga-enweta akara ngosi amụma na Eloqua ozugbo ị na-agba mkpọsa. N'elu nke ahụ, Mintigo ga-agbanyekwa akara ngosi ahịa ọ bụla ị họọrọ n'ime Eloqua, na-enye ohere maka nkewa nkewa na ozi ndị ọzọ maka ahịa ahịa.
Mintigo ga-abụ onye na-ahụ maka ikuku ụgbọ elu na ngwa ahịa ahịa gị Eloqua. Akpa, ị nwere ike ijide n'aka na kọntaktị ndị gbatara ọsọ na-eburu ụgbọ okporo ígwè ma chọta ụzọ ha ga-esi rute ndị ahịa gị ngwa ngwa. Nke abuo, ị nwere ike ịhazi mkpọsa gị ma zụlite egwu iji mee ka ndị na-ege gị ntị nwee nkwenye na-adabere na njirimara ahịa Mintigo.
Site na Eloqua na Mintigo ị nwere ike ijide n’aka na ị ga - eji ụzọ kachasị mma maka kọntaktị gị ọ bụla site na imezi ozi gị na nsonaazụ ala.
Tags: crm na-ebute akaraeloquaisi ihe na-eduga n'ahịachukwu adamsLinkedInahịamintigonetfactorOracleOracle Ahịa AppCloudigwe ojii ahia ahiaịkọ isi amụmandị ahịasalesforce.com
7 Usoro iji me ka ezumike ezumike gi karie
Tapfiliate: Njikwa Mgbakwunye Ahịa Ahịa